Muxuu salka ku hayaa muranka mooshinka Jawaari? - BBC News Somali
Muxuu salka ku hayaa muranka mooshinka Jawaari?
20 Maarso 2018
Image caption Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari
Muddadii sanadka ahayd ee ay dhisneyd dowladda hadda jirta, waxaa dhawr jeer soo baxay warar sheegaya mooshin ka dhan ah qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda, balse markasta dib ayay wararkaasi ka beentoobi jireen.
Guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa shir jaraa'id ka sheegay in mooshinkii Jawaari uu jabay maadaamaa ay ka noqdeen 13 xildhibaan, sidaasi darteedna ay kusoo hartay 91 xildhibaan, taas oo aanan buuxinaynin guntankii loogu talogalay.
Goobtaas shirka jaraa'id waxaa fadhiyay Cabdiwali Muuday, balse saacado kadib ayuu warbaahinta la hadlay, wuxuuna sheegay in mooshinka uu meelmaray, isaga uu gollaha horgeyn doono.
Baarlamaankii sagaalaad oo codka kalsoonida uu baarlamaanka kala laabtay labo Ra'isulwasaare, Jawaari ma jirin wax mooshin ah oo laga keenay.
Beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed ee Somaaliya
Baarlamaanka Soomaaliya oo diiday heshiiska Berbera
Porf Maxamed Cusmaan Jawaari oo shir jaraa'id qabtay ayaa si toos ah xukuumadda iyo Ra'isulwasaare Xassan Cali Kheyre ugu eedeeyay in ay gadaal ka riixayaan mooshinka, wuxuuna sheegay in xitaa amnigii baarlamaanka ay la wareegeen ciidammo aanan guddoonka baarlamaanka ka amar qaadanin oo ay soo direen laanta fulinta, isaga oo intaas ku daray in loo baahanyahay in uu baarlamaanka ku shiro meel madaxbanaan.
Labo maalmood kadib waxaa shir jaraa'id kasoo muuqday qaar ka mid ah golaha wasiiradda oo Jawaari ugu baaqay in uu iscasilo, haddii kale ay meelmarin doonaan mooshinka.
Iyada oo uu Jawaari ogolaaday in mooshinka codka la galiyo, ayay wali sii socdaan kullamadii ay lahaayeen xildhibaanada keenay, iyo baaqyadii ahaa in uu is casilo, taas oo keentay in taageerayaasha jawaari su'aal geliyaan sababta loo sugi la'yahay waqtiga mooshinka, haddiiba ay kalsooni ku qabaan in ay heystaan cod ku filan in Jawaari la rido.
Inkasta oo Ra'isulwasaaraha iyo madaxweynaha aysan marnaba ka hadlin qalalaasaha siyaasadeed ee jira, ayay Caasho Axmed Cabdalla oo horey xildhibaan u ahaan jirtay qabtaa "Haddii mar mooshinka la keeno, sharciga waxa uu qabaa in guddoomiyaha uu noqonayo xubin caadi ayuu noqonayaa, guddoonkana waa uu ka fariisanayaa".
Maxaa lagu eedeeyay Jawaari
Sida ku qoran warqadda mooshinka, xildhibaanada keenayna ay warbaahinta marar kala duwan u sheegeen, waxaa Jawaari lagu eedeeyay xil gudasho la'aan, cabburin aragtida xildhibaanada iyo eedeymo kale oo culculus.
Sakariye Yuusuf waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan hay'adda xasarada adduunka ee ICG, waxa uu BBC-da uga waramay aragtidiisa ku wajahan eedeymaha Jawaari loo heysto, wuxuuna yiri "Waxaan akhriyay mooshinka hadda laga keenay Jawaari , eeddana cidda soo jeedisay ayaa laga rabaa in ay soo caddeyso, aniga baarlamaanka kama mid ahi, mana sheegi karo in eedeymahaas ay wax ka jiraan iyo in kale, balse waxa meesha yaala ayaa ah in baarlamaankan kii ka horeeyay iyo kanba uu hoggaanka u hayay Jawaari, xaqiiqda marka la fiiriyana wuxuu ku hoggaaminayay waayo-aragnimo, aqoon iyo odaynimo, Soomaaliyana maanta kama maaranto odaynimo".
Eed kasta oo loo heysto Jawaari, waqtiga xasaasiga ah ee uu mooshinka kusoo beegmay ayay dadka qaarkood farta ku fiiqeen in uusan munaasab ahayn in xilligan uu dalka galo qalalaase siyaasadeed sida uu BBC-da u sheegay Maxamed Ibraahim oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan dalka Jabuuti. wuxuuna yiri "Muddo 28 sano ah, siyaasiyiinta Soomaaliya ma aysan samaynin wax dib u heshiisiin qaran ah, waxaan aniga ku ku qiimeeyay siyaasad jiho wareertay, haddiiba maanta uusan baarlamaanka ka shiri haynin sidee dalkan la'isugu soo dhaweeyaa, dar xumaa keentay in siyaasadda Soomaaliya sidan loo fikiro" .
Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya oo wareysi siiyay telefishinka BBC Soomaali